မခုနျခငျကွိုကွညျ့၊ မပွောခငျ အရငျခငျြ့ခြိနျပါ (Look before you leap, think before you speak) – THE CHINLAND POST
မိမိစိတျတိုငျးမကသြညျ့ကိစ်စမြား တဈခုခုပျေါလာသညျ့အခါတိုငျး သသေခြောခြာ မစဉျးစားပဲ ခှနျးတုနျ့ပွနျတတျတာ လူ့သဘာဝလို့ ပွောလို့လညျး ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မိသားစုအိမျတှငျးရေး သို့မဟုတျ ပုဂ်ဂိုလျရေးမဟုတျသညျ့ ကိစ်စရပျမြားတှငျအပျေါ တုံ့ပွနျပွောဆိုမှုမြားပွုလုပျမညျဆိုရငျဖွငျ့ သသေခြောခြာစဉျးစားပွီးမှ ပွောဆိုခွငျးသညျ အကောငျးဆုံးဖွဈသညျ။ ကြှနျတျောတို့ပွောလိုကျတဲ့ စကားတဈခှနျးက အခွားသူမြားအား ထိခိုကျစနေိုငျသညျသာမက ကိုယျ့ရဲ့နှုတျထှကျစကားတဈခှငျးကွောငျ့ ကိုယျ့လူမြိုးရဲ့ ဂုဏျသိက်ခာကိုပါကဆြငျ့းစနေိုငျပွီး အန်တာရယျတှငျးသို့ တှနျးပို့နိုငျတာကွောငျ့ စကားတဈခှနျးမပွောဆိုမီ၊ စာတဈကွောငျးမရေးသားခငျတှငျ ဘေးပတျဝနျးကငျြဒသေအခွေအေနေ၊အခြိနျအခါ အရငျကွညျ့ပွီး စဉျးစားခငျြ့ခြိနျပွီးမှသာလြှငျ ပွောဆိုရေးသားသငျ့သညျ။
ထို့ပွငျ မိမိပွောဆိုရေးသားသညျ့စကားလုံးမြားအပျေါတာဝနျယူ၊တာဝနျခံမှု အပွညျ့ရှိရမှာ ဖွဈသညျ။ထိုနညျးတူစှာပဲ ခတျေနှငျ့အညီတိုးတကျလာသညျ့ နညျးပညာ၊ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမြားပျေါတှငျလညျး(facebook,twitter..) မိမိ၏ရေးသားပွောဆိုမှုမြားကို ပေါ့ပေါ့တနျတနျ သဘောမထားဘဲ တာဝနျယူ၊ တာဝနျခံမှုအပွညျ့အဝရှိသညျ့ စိတျသဘောမြိုးထား သငျ့သညျ။ ကြှနျတျောတို့က အလေးမထားဘဲ လှောငျပွောငျသရျောသလိုမြိုး ပွောဆိုရေးသားမှုမြားကကိုယျ့လူမြိုးအတှကျ ဆိုးကြိုးမြားလညျးဖွဈစနေိုငျပွီး အကြိုးဆကျအနဖွေငျ့ တဈခဏတှငျ ပွနျလညျပွငျဆငျလို့မရနိုငျတဲ့ အဖွဈဆိုးမြားအဖွဈ ထငျကနျြရဈနိုငျသညျ။
လကျရှိကြှနျတျောတို့ ခငျြးလူမြိုး ရငျဆိုငျကွုံတှနေ့ရေသညျ့ စဈပှဲ၏နောကျဆိုးကြိုးရလဒျမြားကွောငျ့ ခငျြးတဈမြိုးသားလုံး ခံစားကွပွီး မခံမရပျနိုငျဖွဈသညျမှာ အမှနျဖွဈသညျ။ ယခုလိုမြိုးအခြိနျတှငျ ခံပွငျးတဲ့စိတျနဲ့ စိတျနဲ့ ရရာလကျနကျကိုစှဲကိုငျ ပွီးပွနျလညျ ခပြေလိုစိတျပွငျးပွနမေညျမှာ အသခြောပါပဲ။သို့ရာတှငျ လကျရှိရငျဆိုငျနရေသညျ့ပွသနာမြားသညျသေးသေးမှားမှားကိစ်စမြားမဟုတျသညျ့အတှကျဂဃ နဏလလေ့ာသိရှိပွီးမှ သသေခြောခြာစဉျးစားသုံးသပျပွီးမှသာလြှငျခွငျသုံးသပျပွီးမှ ပွောဆို ရေးသားခွငျးသညျသာ အကောငျးဆုံးဖွဈသညျ။
ထို့ကွောငျ့ ဒီလိုအခြိနျခိုကျမှာ တဈခုခု ကိုယျ့က မပွောထှကျခငျ စဉျးစားထညျ့သှငျးရမညျ့အခကျြမြားကို ထောကျပွလိုပါတယျ။ ယခုလို ထောငျပွခွငျးသညျ ခငျြးအမြိုးသားတပျဦး CNF ကို ကာကှယျပွီး ပွောပေးတာမဟုတျဘဲ ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြမှာ ဘာတှဖွေဈလဲ၊ နောကျဆကျတှဲ ဘာဖွဈနိုငျလဲဆိုသညျ့ အတှေးချေါမြိုးအပျါအရငျ အခွခေံပွီးမှသာ စဉျးစားစလေိုသညျ့ ရညျရှယျခကျြမြှသာ ဖွဈတယျ။
၁။ ထောငျပေါငျးမြားစှာသော ကိုယျ့လူမြိုး အသကျအန်တရယျ၊ ဒုက်ခမြားစှာဖွငျ့ ခြိနျးခွောကျမှုခံနတေဲ့အခြိနျမှာ CNF က ဘာလုပျနတောလဲ ? ကိုယျ့လူမြိုး ဒီလိုအခွအေနမြေိုးမှာ ဒီအတိုငျးဘဲ ကွညျ့နမှောလား? ကိုယျ့လူမြိုးကို ကာကှယျပေးဖို့က သူတို့ကိုယျတိုငျ ထမျးယူထားတဲ့ ဝနျမဟုတျဘူးလာဆိုပွီး အှနျးလိုငျးပျေါမှာ တကျလာသညျ့အရေးအသားတှေ တှရေ့တာ ကွာနပွေီဖွဈသညျ။ အခြို့ဆို CNF ခေါငျးဆောငျတှကေ ကွိုကျသလို နိုငျငံခွားတှေ သှားပွီး ပြျောပါးနကွေတယျ ဆိုသညျ့ အရေးအသားမြိုးဖွငျ့ မလေးစားသဖှယျပွုကာ ဆဲဆိုတာမြိုး အထိရေးသားလာတာ တှရေ့သညျ။ ဘာဘဲဖွဈဖွဈ ဒီအကွောငျးအရာကို ပွောမယျဆိုရငျ CNF နှငျ့ အစိုးရကွားမှာ နှဈဦးနှဈဖကျသဘောတူ ကတိကဝတျပွုထားသညျ့ စာခြုပျ(bilateral cease-fire agreement)ကို သခြောပွနျလညျ သုံးသပျကွညျ့ဖို့က အရမျးလိုအပျပါသညျ။ ၂၀၁၂ မှာ အစိုးနှငျ့ ပွညျနယျအဆငျ့ အပဈခတျရပျစဲရေးစာခြုပျကို CNF သဘောတူလကျမှတျ ထိုးခဲ့သညျ။ ထိုစာခြုပျရ CNF တို့၏ ထိနျးခြုပျသညျ့နရောဒသေ၊ လှုပျရှားသှားလာလို့ရသညျ့ နယျမွတှေေ သတျမှတျပေးထားတာ ရှိတယျ။ သူတို့ထိနျးခြုပျ လှုပျရှားလို့ရသညျနယျမွမှေ လကျနကျမြားနှငျ့ သှားလာမှုမြားကို တားမွဈထားပါတယျ။ အဲ့လိုဘဲ CNF တို့၏ ထိနျးခြုပျနယျမွထေဲ တပျမတျောသားမြားက လကျနကျမြားဖွငျ့ လှုပျရှားသှားလားခှငျ့ကိုလညျး ပိတျပငျထားတယျ။ အဲလို တားမွဈခကျြတှကေို မလိုကျနာမိပါက ‘violation of the term of ceasefire’ ဆိုသညျ့ နှဈဖကျသဘောတူ အပဈခပျရပျဆဲရေး သဘောတူစာခြုပျကို ခြိုးဖောကျတာ ဖွဈသှားမှာ။ ထိုစာခြုပျအရ CNF တပျသားမြားသညျ ပလကျဝ ဒသေမြားတှငျ Pathiantlang တောငျ နီးနားကလှဲ၍ လကျနကျဖွငျ့ လှုပျရှားလာခှငျ့ကို ပိတျပငျထားသညျ။ ဥပမာ ၂၀၁၆ တုနျးက Christmas ပှဲတျောကငျြးပစဉျ ရှားသားတှကေ CNF တပျသားအခြို့ကို ထမငျးစား ဖိတျချေါကွှေးကွပွီး ထို CNF/CNA တပျသားမြားက လကျနကျမြား ယူလာသောကွောငျ့ တပျမတောက ရှာသားတှအေား CNF/CNA တပျသားမြား ပွနျသှားပွီးနောကျ ဖမျးဆီးကာ ပွဈဒဏျတှေ ပေးခဲ့သညျ။ ဆိုလိုတာက ယခု AA တပျတှေ လှုပျရှားသညျ့နရောဒသေမြားသညျ CNF/CNA တပျသားမြား လကျနကျဖွငျ့ လှုပျရှားသှားလာခှငျ့ ပိတျထားသညျ့ နရောမြားဖွဈသညျ။ အကယျလို့သာ CNF က ထိုဒသေတှကေို လကျနကျဖွငျ့ ဝငျရောကျလှုပျရှားမှုပွုလုပျလာပါက အပဈခတျရပျဆဲရေးကို တိုကျရိုကျ ခြိုးဖောကျလိုကျတာ ဖွဈသှားမညျ။ အဲလိုမြိုး CNF ဘကျက တိုကျရိုကျခြိုးဖောကျမှုလုပျခဲ့လြှငျ သူတို့၏ နိုငျငံရေး ဂုဏျသိက်ခာ အမညျနာမ ဆိုးသှားရုံသာမက ခငျြးလူမြိုး ဂုဏျအထိ ထိပါးမှုတှေ တိုးလာမှာ သခြောသညျ။ ထိုအခကျြသညျ လူမြိုးတဈမြိုး၏ ဂုဏျသက်ခာဖွငျ့ စဉျးစားရမညျ့အခကျြဖွဈသညျ။
၂။ လကျနကျကိုငျ နှဈဖှဲ့၏ လှုပျရှားပဈခတျမှုနဲ့မြှသာ ဒီလောကျတောငျ ပွညျသူတှေ ဆငျးရဲ ဒုက်ခ ခံစားနရေပွီ။ အကယျလို့ နောကျထပျ လကျနကျကိုငျတပျဖှဲ့တဈခုသာ ပါဝငျလှုပျရှားလာပါက ပွညျသူတှရေဲ့ ခံစားမညျ့ဒုက်ခ ဝနျထုပျပိုးသညျ ဒီထကျမက သုံးဆ တိုးလာမှာ အသခြောပငျဖွဈသညျ။ ရကျခိုင့တြပြ‌တြေျာနှငျ့ ဗမာတပျတှေ လှုပျရှားမှုမြားကွောငျ့ ပွညျသူတှေ စားစရာ ငတျပွတျနကွေသညျ။ ထိုအခြိနျမှာ CNF/CNA တပျသားတှသော လှုပျရှားလာပါက ပွညျသူတှေ ဘယျလောကျ အစာ ငတျပွတျ ခံစားနရေမလဲဆိုတာ မတှေးဝံ့စရာပါ။ နောကျတဈခုက ဘယျလကျနကျကိုငျ လှုပျရှားသညျ့နရောဒသေမဆို လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျမှုမြား မွငျ့တကျလာသညျ။ ထိုကိစ်စကို သခြောစဉျးစားရမညျ့ အခကျြဖွဈသညျ။
၃။ လကျရှိ အခွအေနအေရ စာခြုပျသဘော သဘာဝရှိသညျ့ နညျးဗြူဟာ အနအေထားဖွငျ့ ပွောရလြှငျ CNF က ယခုလိုမြိုး ခငျြးပိုငျနကျမြားတှငျ AA နှငျ့ တပျမတျော လှုပျရှားပဈခတျမှုမြားကွောငျ့ အပွဈမဲ့ ခငျြးလူမြိုးတှေ အသကျဆုံးရှုံးကာ မလိုလားအပျသညျ့ ဒုက်ခခံစားနရောတာကို မကွညျ့နိုငျတော့ဘဲ သှားပဈမယျဆိုပါက ဗမာတပျမတျောနှငျ့ ပူးပေါငျးမှသာ အလုပျဖွဈနိုငျမညျ့သဘော ရှိနသေညျ။ အဲ့ဒီလိုသာ ဆောငျရှကျခဲ့လြှငျ ကိုယျ့လူမြိုးကို ဆငျးရဲတှငျးထဲ တှနျးပို့သူ ဗမာ့တပျမတျောနှငျ့ မိတျသှားဖိတျခွငျးဖွငျ့ ကိုယျ့ခငျြးလူမြိုးဂုဏျကို ရောငျးစားသလို ဖွဈသှားလိမျ့မညျ။ နောကျပွီး ကိုယျ့ညီနောငျ တိုငျးရငျးသားတှရှေမှေ့ာ ကိုယျ့ကိုယျကို အရှကျသှားခှဲရုံသာမက ကိုယျ့မကျြနှာကို အိုးမဲသုတျသလို ဖွဈသှားမှာ မလှဲသခြောသညျ။ ကမ်ဘာ့အရပျလယျမှာလညျး ခငျြးလူမြိုးမြား မကျြနှာက ဆံ့တော့မှာမဟုတျသလို သူမြားနှိမျခံရသညျ့ လူမြိုးအဖွဈ အမွဲတိုငျး သမိုငျးမှာ ကရြောကျသှားမှာ ဖွဈသညျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီကိစ်စသညျ ဧကနျမလှဲ စဉျးစားရမညျ့အခကျြဖွဈသညျ။
၄။ အကယျလို့ AA ကို ထိုးစဈဆငျကာ တိုကျထုတျမယျဆိုလြှငျ ဒီကိစ်စသညျ လကျနကျကိုငျ တဈဖှဲ့နှငျ့ တဈဖှဲ့အကွား ဒီအတိုငျးပွီးသှားမညျ့ အရာမဟုတျပါ။ နှဈဖကျက ထောကျခံသူတှကွေားမှာ တငျးမာမှုတှေ ပွငျးထနျလာပွီး နောကျဆုံးတော့ လူမြိုး တဈမြိုး နှငျ့ တဈမြိုး၏ ပဋိပက်ခ ဖွဈစလောနိုငျသညျ။ သတျဖွတျမှုတှဖွေငျ့ သှေးစီးလာမညျ။ ထိုအနာမြားသညျ ကုသလို့မရသညျ့အနာလို ဖွဈပွီး သမိုငျးမှာ မမနေို့ငျဖှယျအရာအဖွဈ အမွဲ ကနျြခဲ့တော့မှာ ဖွဈသညျ။ နောကျ ကြှနျတျောတို့တှေ မမရေ့နျလိုအပျသညျ့ အဓိကအခကျြမှာ ပလကျဝဒသေမှာနထေိုငျသညျ့ ခငျြးလူမြိုးတှထေကျ ရခိုငျပွညျက ခငျြးလူမြိုး လူဦးရေးက ပိုမြားနသေညျ။ ထိုညီအကိုမြားသညျ ခတျေအဆကျဆကျက အခွခေနြထေိုငျခဲ့ကွသျောလညျး ဒုတိယ နိုငျငံသားအဆငျ့မှာသာ (second class citizen) ဆကျဆံခွငျး ခံနကွေသူမြား ဖွဈကွသညျ။ အစကပွောသလို အကယျလို့ AA နှငျ့သာ တိုကျပှဲဖွဈခဲ့ပါက ရခိုငျပွညျက ထိုညီအကိုမြားက အဆပေါငျးမြားစှာ အကြိုးဆကျ ခံစားရမှာဖွဈသညျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုရငျ သူတို့သညျ အကူညီမဲ့ နကွေပါသညျ။ သူတို့အတှကျကို ထညျ့သှငျးစဉျးစားမှုမပွုလြှငျ ကိုယျလူမြိုးအခငျြးခငျြး ပွနျသတျတာနဲ့ အတူဖွဈလိမျ့မညျ။ နောကျတဈခကျြက အကယျလို့ CNF နှငျ့ AA ကွားမှာသာ တိုကျပှဲဖွဈပှားခဲ့ပါက ခဏအခြိနျတဖွုတျမှာ ငွိမျးလို့ရမညျ့ တိုကျပှဲဖွဈမှာမဟုတျဘူး။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ နိုငျငံရေးအရ အမွငျကှဲလှဲမှုမြားကွောငျ့ ဖွဈပှားသညျ့ ပဋိပက်ခမဟုတျဘဲ လူမြိုးကိုအခွခေံကာ လူမြိုးနှဈမြိုးကွားက မကွလှေယျမှုမြားကွောငျ့ ဖွဈလာမညျ့ ပဋိပက်ခသညျ သှေးယိုစီးမှုမြားလာမှာ ဧကနျမလှဲဖွဈသညျ။ ဒီလို ပဋိပက်ခမြားသညျ ကမ်ဘာနိုငျငံအမြားမှာ ဥပမာမြားစှာတှနေို့ငျသလို အိမျနီးခငျြးနိုငျငံဖွဈသညျ India မှာ Manipur ပွညျနယျဘကျက လူမြိုးနှဈမြိုးကွား ပဋိပက်ခ တိုကျပှဲကို ကြှနျတျောတို့အနဖွေငျ့ အတုယု သငျ့ပါသညျ။ India အစိုးရက သူကွိုကျတဲ့အခြိနျ တိုကျပှဲတှေ ဆငျပေးပွီး သူမှေးထားတဲ့ခှေးသဖှယျ အခငျြးခငျြး ခှေးလို ကိုကျခိုငျးပွီး ဘာမှမသိသလိုသာ ကွညျ့နပွေီး နောကျဆုံးမှာတော့ India အစိုးရမှာ စတေနာအရငျးဖွငျ့ သူတို့ကွား ဝငျရောကျဖွရှေငျးမပွုဘဲ အမွတျထုတျနတောကို မွငျတှရေ့မှာဖွဈတယျ။ အကယျလို့ ကြှနျတျောတို့လညျးဘဲ တိုကျပှဲဆငျနှဲခဲ့ပါက ထို့အတိုငျးသာ ဖွဈနိုငျခွမြေားပွီး ကြှနျတျောတို့လူမြိုး ဖှံဖွိုးတိုးတကျမှုကို အတားအဆီးပေးပွီး ငွိမျးခမျြးရေးဆိုတာ ကြှနျတျောတို့အတှကျ အရမျးကို ဝေးကှာလှသညျ့ ခရီးတဖှယျ ဖွဈလာလိမျ့မညျ။
၅။ လကျရှိ ခငျြးပွညျနယျ၊ ပလကျဝ ဒသေ နှငျ့ ရခိုငျဘကျက ဖွဈပှားနသေညျ့ တပျမတျောနှငျ့ AA ရကျခိုင့တြပြ‌တြေျာကွား တိုကျပှဲမြား၏ အကွောငျးရငျးကိုကွညျ့လြှငျ ပထဝီနိုငျငံရေးလို့ချေါတဲ့ geo-politics ကွောငျ့လညျး ဖွဈတယျလို့ ပွောလြှငျဖွငျ့ မမှားပါဘူး။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုရငျ နိုငျငံကွီးဖွဈတဲ့ တရုတျ နှငျ့ India နှဈနိုငျငံက အရှတေ့ောငျအာရှဒသေတှငျ သူတို့၏ သွဇာအာဏာ လှမျးမိုးနိုငျရေးအတှကျ အပွနျအလှနျ ရခိုငျပွညျနယျထှကျ ရနေံတှကေို ထိနျးခြုပျဖို့ ကွိုးစားနကွေတယျ။ India က ပလကျဝဒသေမှ Kaladan မွဈကွီးကို အသုံးပွု၍ ရခိုငျပွညျနယျထှကျ ရနေံတှေ သယျယူပို့ဆောငျနိုငျရေးအတှကျ လမျးပိုငျးဆကျသှယျရေး အဆငျပွရေနျအတှကျ အမရေိကနျ ဒျေါလာ ၄၀၀ သနျးကြျောကို ရငျးနှီးထားပါတယျ။ တဖကျက တရုတျလညျး ထို့အတိုငျး ရခိုငျပွညျထှကျ ရနေံတှေ သယျယူဖို့ရနျ အမရေိကနျ ဒျေါလာ သိနျးပေါငျးကြျော ရငျးနှီးသညျ့အပွငျ ကြောကျဖွူမှာ ဆိပျကမျးအကွီးကွီး တညျဆောကျထားပါတယျ။ တရုတျကတော့ သူတို့၏ ရငျးနှီးထားသညျ့စီးပှားရေးရုံတှကေို ကာကှယျဖို့အတှကျ ဗမာအစိုးရနှငျ့ တပျမတျောတှကေို အားကိုးမယျ့အစား လကျနကျကိုငျအဖှဲ့တဈခုကို မှေးထုပျတာကမှ အကြိုးပိုရှိမယျဆိုတာ သူတို့တှေးထားပွီးသားဖွဈတယျ။ မေးခှနျးထုတျစရာရှိတာက AA က အငျအားတောငျ့တငျးလှတဲ့ ဗမာ့တပျမတျောထကျ ဘယျလိုဖွဈပွီး လကျနကျ ကညျြဆံတှေ ပိုရှိနရေတာလဲ ? ဗမာ့တပျမတျော၏ လယောဉျတှကေသာလှဲလို့ မွပွေငျပျေါမှာဆိုရငျ AA က ဗမာ့တပျမတျောတှကေို မကွောကျဘူး။ အမွဲတိုကျနတေယျ။ ပွီးရငျ မေးစရာမလိုဘဲ တရုတျနယျစပျမှာ ရက်ခိုငျ့တပျတျော AA ဘယျသူက ထုတျပံ့မှုတှေ ပေးနလေဲဆိုတာ အသိသာကွီးဖွဈသညျ။ ကမ်ဘာ့လုံးမှာတောငျ တရုတျဆိုပွီး ခေါငျးထောငျနသေညျ့နိုငျငံက ရပျတညျ ထုတျပံ့ပေးမှတော့ ဗမာ့တပျမတျောက AA အဖှဲ့ကို အပွီးပကျြတိုကျဖကျြဖို့ဆိုတာ ထငျသလောကျ မလှယျကူလှပါဘူး။ သို့ပမေဲ့ CNF နှငျ့ India ကို ပွနျကွညျ့မယျဆိုရငျ India က တရုတျလိုမြိုး CNF အပျေါ ထုတျပံ့ ရပျတညျပေးမှာ မဟုတျပါဘူး။ ထုတျပံမှုလုပျခဲ့ရငျသျော India ကတော့ သူတို့၏အကြိုးအမွတျမရှိလြှငျ ဘာမှလုပျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ထုတျပံ့ ရပျတညျပေးလညျး ဒုတိယကမ်ဘာ့စဈတုနျးက အမရေိကနျ နှငျ့ ရာရှားတို့၏ နိုငျငံရေးတိုကျပှဲကို သူတို့အခငျြးခငျြးပိုငျနကျမှာ တိုကျခိုကျခွငျးမြိုးမပွုဘဲ သူတို့၏ ထုတျပံ့မှုဖွငျ့ရပျတညျနသေညျ့ နိုငျငံပိုငျနကျတှမှော စဈပှဲ ဖနျတီးသလိုမြိုး ပျေါလာပွီး ကြှနျတျောတို့ ခငျြးလူမြိုးတှေ သူတို့၏ အုပျစိုး လှမျးမိုးမှုအောကျသို့ ရောကျသှားမှာဖွဈတယျ။
ထို့ကွောငျ့ အရေးတကွီး သခြော စဉျးစားရမယျ့အကွောငျးအရာမြားထဲမှာမှ မဖွဈမနေ စဉျးစားရမညျ့အခကျြတှကေိုသာ အပျေါမှာ ဆှေးနှေးသှားတာ ဖွဈတယျ။ ဒီ အခကျြတှကေို သခြော စဉျးစားပွီးမှသာ ကြှနျတျောတို့ ဘာကိုပွောဆိုသငျ့လဲဆိုတာ ထောကျပွခငျြယုံမြှဖွငျ့ ရေးသားခွငျး ဖွဈပါသညျ။ နိဂုနျးအနဖွေငျ့ အင်ျဂလိပျ ဆိုရိုးတဈခုဖွဈတဲ့ “Look before you leap, think before you speak” “မခုနျခငျအရငျကွညျ့၊ မပွောခငျ အရငျသခြောစဉျးစား” ဆိုသညျ့အတိုငျး ကြှနျတျောတို့ သခြောစဉျးစားပွီးမှသာ ပွောဆို လုပျဆောငျတာမြိုး ကောငျးပါတယျ။ ထို့သို့မဟုတျဘဲ သှေးဆူ ခံပွငျးတဲ့အခြိနျတှငျ သခြောစဉျးစားမှုမပွုဘဲ ပွောဆိုရေးသားမှုမြားကွောငျ့ လူမြိုးဂုဏျကို ထိပါးရုံသာမက အန်တရယျ ဆိုးကြိုးမြားသညျ့ တှငျးထဲပို့နိုငျသောကွောငျး သတိပွုရနျ တိုကျတှနျးရငျး နိဂုနျးခြုပျပါသညျ။
Editor Note: ဒီအတှေးအမွငျစာသညျ The Chinland Post သတငျးကို နစေ့ဉျအားပေးနသေော စာဖတျပရိသတျမြား၏ တောငျးဆိုမှုဖွငျ့ မူရငျး လိုငျး (Laica) ဘာသာကနေ ဗမာလို စီလြှျောအောငျ ဘာသာပွနျပေးလိုကျခွငျးဖွဈသညျ။ အကယျလို့ အကွောငျးအရငျးအဆကျစပျမရှိဘူးဟု ခံယူပွီး မူးရငျးကို ဖတျလိုသူမြားအတှကျ ဒီမှာ (CLICK HERE) နှိပျပွီး ဖတျနိုငျပါသညျ။
မခုန်ခင်ကြိုကြည့်၊ မပြောခင် အရင်ချင့်ချိန်ပါ (Look before you leap, think before you speak)
မိမိစိတ်တိုင်းမကျသည့်ကိစ္စများ တစ်ခုခုပေါ်လာသည့်အခါတိုင်း သေသေချာချာ မစဉ်းစားပဲ ခွန်းတုန့်ပြန်တတ်တာ လူ့သဘာဝလို့ ပြောလို့လည်း ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိသားစုအိမ်တွင်းရေး သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမဟုတ်သည့် ကိစ္စရပ်များတွင်အပေါ် တုံ့ပြန်ပြောဆိုမှုများပြုလုပ်မည်ဆိုရင်ဖြင့် သေသေချာချာစဉ်းစားပြီးမှ ပြောဆိုခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းက အခြားသူများအား ထိခိုက်စေနိုင်သည်သာမက ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားတစ်ခွင်းကြောင့် ကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါကျဆင့်းစေနိုင်ပြီး အန္တာရယ်တွင်းသို့ တွန်းပို့နိုင်တာကြောင့် စကားတစ်ခွန်းမပြောဆိုမီ၊ စာတစ်ကြောင်းမရေးသားခင်တွင် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ဒေသအခြေအနေ၊အချိန်အခါ အရင်ကြည့်ပြီး စဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီးမှသာလျှင် ပြောဆိုရေးသားသင့်သည်။
ထို့ပြင် မိမိပြောဆိုရေးသားသည့်စကားလုံးများအပေါ်တာဝန်ယူ၊တာဝန်ခံမှု အပြည့်ရှိရမှာ ဖြစ်သည်။ထိုနည်းတူစွာပဲ ခေတ်နှင့်အညီတိုးတက်လာသည့် နည်းပညာ၊ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာများပေါ်တွင်လည်း(facebook,twitter..) မိမိ၏ရေးသားပြောဆိုမှုများကို ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောမထားဘဲ တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုအပြည့်အဝရှိသည့် စိတ်သဘောမျိုးထား သင့်သည်။ ကျွန်တော်တို့က အလေးမထားဘဲ လှောင်ပြောင်သရော်သလိုမျိုး ပြောဆိုရေးသားမှုများကကိုယ့်လူမျိုးအတွက် ဆိုးကျိုးများလည်းဖြစ်စေနိုင်ပြီး အကျိုးဆက်အနေဖြင့် တစ်ခဏတွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်လို့မရနိုင်တဲ့ အဖြစ်ဆိုးများအဖြစ် ထင်ကျန်ရစ်နိုင်သည်။
လက်ရှိကျွန်တော်တို့ ချင်းလူမျိုး ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် စစ်ပွဲ၏နောက်ဆိုးကျိုးရလဒ်များကြောင့် ချင်းတစ်မျိုးသားလုံး ခံစားကြပြီး မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်သည်မှာ အမှန်ဖြစ်သည်။ ယခုလိုမျိုးအချိန်တွင် ခံပြင်းတဲ့စိတ်နဲ့ စိတ်နဲ့ ရရာလက်နက်ကိုစွဲကိုင် ပြီးပြန်လည် ချေပလိုစိတ်ပြင်းပြနေမည်မှာ အသေချာပါပဲ။သို့ရာတွင် လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရသည့်ပြသနာများသည်သေးသေးမွှားမွားကိစ္စများမဟုတ်သည့်အတွက်ဂဃ နဏလေ့လာသိရှိပြီးမှ သေသေချာချာစဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးမှသာလျှင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးမှ ပြောဆို ရေးသားခြင်းသည်သာ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ဒီလိုအချိန်ခိုက်မှာ တစ်ခုခု ကိုယ့်က မပြောထွက်ခင် စဉ်းစားထည့်သွင်းရမည့်အချက်များကို ထောက်ပြလိုပါတယ်။ ယခုလို ထောင်ပြခြင်းသည် ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကို ကာကွယ်ပြီး ပြောပေးတာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘာတွေဖြစ်လဲ၊ နောက်ဆက်တွဲ ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုသည့် အတွေးခေါ်မျိုးအပ်ါအရင် အခြေခံပြီးမှသာ စဉ်းစားစေလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်မျှသာ ဖြစ်တယ်။
၁။ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကိုယ့်လူမျိုး အသက်အန္တရယ်၊ ဒုက္ခများစွာဖြင့် ချိန်းခြောက်မှုခံနေတဲ့အချိန်မှာ CNF က ဘာလုပ်နေတာလဲ ? ကိုယ့်လူမျိုး ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဒီအတိုင်းဘဲ ကြည့်နေမှာလား? ကိုယ့်လူမျိုးကို ကာကွယ်ပေးဖို့က သူတို့ကိုယ်တိုင် ထမ်းယူထားတဲ့ ဝန်မဟုတ်ဘူးလာဆိုပြီး အွန်းလိုင်းပေါ်မှာ တက်လာသည့်အရေးအသားတွေ တွေ့ရတာ ကြာနေပြီဖြစ်သည်။ အချို့ဆို CNF ခေါင်းဆောင်တွေက ကြိုက်သလို နိုင်ငံခြားတွေ သွားပြီး ပျော်ပါးနေကြတယ် ဆိုသည့် အရေးအသားမျိုးဖြင့် မလေးစားသဖွယ်ပြုကာ ဆဲဆိုတာမျိုး အထိရေးသားလာတာ တွေ့ရသည်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအကြောင်းအရာကို ပြောမယ်ဆိုရင် CNF နှင့် အစိုးရကြားမှာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူ ကတိကဝတ်ပြုထားသည့် စာချုပ်(bilateral cease-fire agreement)ကို သေချာပြန်လည် သုံးသပ်ကြည့်ဖို့က အရမ်းလိုအပ်ပါသည်။ ၂၀၁၂ မှာ အစိုးနှင့် ပြည်နယ်အဆင့် အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်ကို CNF သဘောတူလက်မှတ် ထိုးခဲ့သည်။ ထိုစာချုပ်ရ CNF တို့၏ ထိန်းချုပ်သည့်နေရာဒေသ၊ လှုပ်ရှားသွားလာလို့ရသည့် နယ်မြေတွေ သတ်မှတ်ပေးထားတာ ရှိတယ်။ သူတို့ထိန်းချုပ် လှုပ်ရှားလို့ရသည်နယ်မြေမှ လက်နက်များနှင့် သွားလာမှုများကို တားမြစ်ထားပါတယ်။ အဲ့လိုဘဲ CNF တို့၏ ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲ တပ်မတော်သားများက လက်နက်များဖြင့် လှုပ်ရှားသွားလားခွင့်ကိုလည်း ပိတ်ပင်ထားတယ်။ အဲလို တားမြစ်ချက်တွေကို မလိုက်နာမိပါက ‘violation of the term of ceasefire’ ဆိုသည့် နှစ်ဖက်သဘောတူ အပစ်ခပ်ရပ်ဆဲရေး သဘောတူစာချုပ်ကို ချိုးဖောက်တာ ဖြစ်သွားမှာ။ ထိုစာချုပ်အရ CNF တပ်သားများသည် ပလက်ဝ ဒေသများတွင် Pathiantlang တောင် နီးနားကလွဲ၍ လက်နက်ဖြင့် လှုပ်ရှားလာခွင့်ကို ပိတ်ပင်ထားသည်။ ဥပမာ ၂၀၁၆ တုန်းက Christmas ပွဲတော်ကျင်းပစဉ် ရွားသားတွေက CNF တပ်သားအချို့ကို ထမင်းစား ဖိတ်ခေါ်ကြွေးကြပြီး ထို CNF/CNA တပ်သားများက လက်နက်များ ယူလာသောကြောင့် တပ်မတောက ရွာသားတွေအား CNF/CNA တပ်သားများ ပြန်သွားပြီးနောက် ဖမ်းဆီးကာ ပြစ်ဒဏ်တွေ ပေးခဲ့သည်။ ဆိုလိုတာက ယခု AA တပ်တွေ လှုပ်ရှားသည့်နေရာဒေသများသည် CNF/CNA တပ်သားများ လက်နက်ဖြင့် လှုပ်ရှားသွားလာခွင့် ပိတ်ထားသည့် နေရာများဖြစ်သည်။ အကယ်လို့သာ CNF က ထိုဒေသတွေကို လက်နက်ဖြင့် ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်လာပါက အပစ်ခတ်ရပ်ဆဲရေးကို တိုက်ရိုက် ချိုးဖောက်လိုက်တာ ဖြစ်သွားမည်။ အဲလိုမျိုး CNF ဘက်က တိုက်ရိုက်ချိုးဖောက်မှုလုပ်ခဲ့လျှင် သူတို့၏ နိုင်ငံရေး ဂုဏ်သိက္ခာ အမည်နာမ ဆိုးသွားရုံသာမက ချင်းလူမျိုး ဂုဏ်အထိ ထိပါးမှုတွေ တိုးလာမှာ သေချာသည်။ ထိုအချက်သည် လူမျိုးတစ်မျိုး၏ ဂုဏ်သက္ခာဖြင့် စဉ်းစားရမည့်အချက်ဖြစ်သည်။
၂။ လက်နက်ကိုင် နှစ်ဖွဲ့၏ လှုပ်ရှားပစ်ခတ်မှုနဲ့မျှသာ ဒီလောက်တောင် ပြည်သူတွေ ဆင်းရဲ ဒုက္ခ ခံစားနေရပြီ။ အကယ်လို့ နောက်ထပ် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုသာ ပါဝင်လှုပ်ရှားလာပါက ပြည်သူတွေရဲ့ ခံစားမည့်ဒုက္ခ ဝန်ထုပ်ပိုးသည် ဒီထက်မက သုံးဆ တိုးလာမှာ အသေချာပင်ဖြစ်သည်။ ရက်ခိုငျ့တပျ‌တော်ျနှင့် ဗမာတပ်တွေ လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် ပြည်သူတွေ စားစရာ ငတ်ပြတ်နေကြသည်။ ထိုအချိန်မှာ CNF/CNA တပ်သားတွေသာ လှုပ်ရှားလာပါက ပြည်သူတွေ ဘယ်လောက် အစာ ငတ်ပြတ် ခံစားနေရမလဲဆိုတာ မတွေးဝံ့စရာပါ။ နောက်တစ်ခုက ဘယ်လက်နက်ကိုင် လှုပ်ရှားသည့်နေရာဒေသမဆို လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ မြင့်တက်လာသည်။ ထိုကိစ္စကို သေချာစဉ်းစားရမည့် အချက်ဖြစ်သည်။
၃။ လက်ရှိ အခြေအနေအရ စာချုပ်သဘော သဘာဝရှိသည့် နည်းဗျူဟာ အနေအထားဖြင့် ပြောရလျှင် CNF က ယခုလိုမျိုး ချင်းပိုင်နက်များတွင် AA နှင့် တပ်မတော် လှုပ်ရှားပစ်ခတ်မှုများကြောင့် အပြစ်မဲ့ ချင်းလူမျိုးတွေ အသက်ဆုံးရှုံးကာ မလိုလားအပ်သည့် ဒုက္ခခံစားနေရာတာကို မကြည့်နိုင်တော့ဘဲ သွားပစ်မယ်ဆိုပါက ဗမာတပ်မတော်နှင့် ပူးပေါင်းမှသာ အလုပ်ဖြစ်နိုင်မည့်သဘော ရှိနေသည်။ အဲ့ဒီလိုသာ ဆောင်ရွက်ခဲ့လျှင် ကိုယ့်လူမျိုးကို ဆင်းရဲတွင်းထဲ တွန်းပို့သူ ဗမာ့တပ်မတော်နှင့် မိတ်သွားဖိတ်ခြင်းဖြင့် ကိုယ့်ချင်းလူမျိုးဂုဏ်ကို ရောင်းစားသလို ဖြစ်သွားလိမ့်မည်။ နောက်ပြီး ကိုယ့်ညီနောင် တိုင်းရင်းသားတွေရှေ့မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရှက်သွားခွဲရုံသာမက ကိုယ့်မျက်နှာကို အိုးမဲသုတ်သလို ဖြစ်သွားမှာ မလွဲသေချာသည်။ ကမ္ဘာ့အရပ်လယ်မှာလည်း ချင်းလူမျိုးများ မျက်နှာက ဆံ့တော့မှာမဟုတ်သလို သူများနှိမ်ခံရသည့် လူမျိုးအဖြစ် အမြဲတိုင်း သမိုင်းမှာ ကျရောက်သွားမှာ ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် ဒီကိစ္စသည် ဧကန်မလွဲ စဉ်းစားရမည့်အချက်ဖြစ်သည်။
၄။ အကယ်လို့ AA ကို ထိုးစစ်ဆင်ကာ တိုက်ထုတ်မယ်ဆိုလျှင် ဒီကိစ္စသည် လက်နက်ကိုင် တစ်ဖွဲ့နှင့် တစ်ဖွဲ့အကြား ဒီအတိုင်းပြီးသွားမည့် အရာမဟုတ်ပါ။ နှစ်ဖက်က ထောက်ခံသူတွေကြားမှာ တင်းမာမှုတွေ ပြင်းထန်လာပြီး နောက်ဆုံးတော့ လူမျိုး တစ်မျိုး နှင့် တစ်မျိုး၏ ပဋိပက္ခ ဖြစ်စေလာနိုင်သည်။ သတ်ဖြတ်မှုတွေဖြင့် သွေးစီးလာမည်။ ထိုအနာများသည် ကုသလို့မရသည့်အနာလို ဖြစ်ပြီး သမိုင်းမှာ မမေ့နိုင်ဖွယ်အရာအဖြစ် အမြဲ ကျန်ခဲ့တော့မှာ ဖြစ်သည်။ နောက် ကျွန်တော်တို့တွေ မမေ့ရန်လိုအပ်သည့် အဓိကအချက်မှာ ပလက်ဝဒေသမှာနေထိုင်သည့် ချင်းလူမျိုးတွေထက် ရခိုင်ပြည်က ချင်းလူမျိုး လူဦးရေးက ပိုများနေသည်။ ထိုညီအကိုများသည် ခေတ်အဆက်ဆက်က အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသော်လည်း ဒုတိယ နိုင်ငံသားအဆင့်မှာသာ (second class citizen) ဆက်ဆံခြင်း ခံနေကြသူများ ဖြစ်ကြသည်။ အစကပြောသလို အကယ်လို့ AA နှင့်သာ တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါက ရခိုင်ပြည်က ထိုညီအကိုများက အဆပေါင်းများစွာ အကျိုးဆက် ခံစားရမှာဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် သူတို့သည် အကူညီမဲ့ နေကြပါသည်။ သူတို့အတွက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုမပြုလျှင် ကိုယ်လူမျိုးအချင်းချင်း ပြန်သတ်တာနဲ့ အတူဖြစ်လိမ့်မည်။ နောက်တစ်ချက်က အကယ်လို့ CNF နှင့် AA ကြားမှာသာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါက ခဏအချိန်တဖြုတ်မှာ ငြိမ်းလို့ရမည့် တိုက်ပွဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နိုင်ငံရေးအရ အမြင်ကွဲလွဲမှုများကြောင့် ဖြစ်ပွားသည့် ပဋိပက္ခမဟုတ်ဘဲ လူမျိုးကိုအခြေခံကာ လူမျိုးနှစ်မျိုးကြားက မကြေလှယ်မှုများကြောင့် ဖြစ်လာမည့် ပဋိပက္ခသည် သွေးယိုစီးမှုများလာမှာ ဧကန်မလွဲဖြစ်သည်။ ဒီလို ပဋိပက္ခများသည် ကမ္ဘာနိုင်ငံအများမှာ ဥပမာများစွာတွေ့နိုင်သလို အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်သည် India မှာ Manipur ပြည်နယ်ဘက်က လူမျိုးနှစ်မျိုးကြား ပဋိပက္ခ တိုက်ပွဲကို ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် အတုယု သင့်ပါသည်။ India အစိုးရက သူကြိုက်တဲ့အချိန် တိုက်ပွဲတွေ ဆင်ပေးပြီး သူမွေးထားတဲ့ခွေးသဖွယ် အချင်းချင်း ခွေးလို ကိုက်ခိုင်းပြီး ဘာမှမသိသလိုသာ ကြည့်နေပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ India အစိုးရမှာ စေတနာအရင်းဖြင့် သူတို့ကြား ဝင်ရောက်ဖြေရှင်းမပြုဘဲ အမြတ်ထုတ်နေတာကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ အကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့လည်းဘဲ တိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ပါက ထို့အတိုင်းသာ ဖြစ်နိုင်ခြေများပြီး ကျွန်တော်တို့လူမျိုး ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုကို အတားအဆီးပေးပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အတွက် အရမ်းကို ဝေးကွာလှသည့် ခရီးတဖွယ် ဖြစ်လာလိမ့်မည်။
၅။ လက်ရှိ ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝ ဒေသ နှင့် ရခိုင်ဘက်က ဖြစ်ပွားနေသည့် တပ်မတော်နှင့် AA ရက်ခိုငျ့တပျ‌တော်ျကြား တိုက်ပွဲများ၏ အကြောင်းရင်းကိုကြည့်လျှင် ပထဝီနိုင်ငံရေးလို့ခေါ်တဲ့ geo-politics ကြောင့်လည်း ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလျှင်ဖြင့် မမှားပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် နိုင်ငံကြီးဖြစ်တဲ့ တရုတ် နှင့် India နှစ်နိုင်ငံက အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွင် သူတို့၏ သြဇာအာဏာ လွှမ်းမိုးနိုင်ရေးအတွက် အပြန်အလှန် ရခိုင်ပြည်နယ်ထွက် ရေနံတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတယ်။ India က ပလက်ဝဒေသမှ Kaladan မြစ်ကြီးကို အသုံးပြု၍ ရခိုင်ပြည်နယ်ထွက် ရေနံတွေ သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် လမ်းပိုင်းဆက်သွယ်ရေး အဆင်ပြေရန်အတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄၀၀ သန်းကျော်ကို ရင်းနှီးထားပါတယ်။ တဖက်က တရုတ်လည်း ထို့အတိုင်း ရခိုင်ပြည်ထွက် ရေနံတွေ သယ်ယူဖို့ရန် အမေရိကန် ဒေါ်လာ သိန်းပေါင်းကျော် ရင်းနှီးသည့်အပြင် ကျောက်ဖြူမှာ ဆိပ်ကမ်းအကြီးကြီး တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ တရုတ်ကတော့ သူတို့၏ ရင်းနှီးထားသည့်စီးပွားရေးရုံတွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ဗမာအစိုးရနှင့် တပ်မတော်တွေကို အားကိုးမယ့်အစား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုကို မွေးထုပ်တာကမှ အကျိုးပိုရှိမယ်ဆိုတာ သူတို့တွေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ မေးခွန်းထုတ်စရာရှိတာက AA က အင်အားတောင့်တင်းလှတဲ့ ဗမာ့တပ်မတော်ထက် ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး လက်နက် ကျည်ဆံတွေ ပိုရှိနေရတာလဲ ? ဗမာ့တပ်မတော်၏ လေယာဉ်တွေကသာလွဲလို့ မြေပြင်ပေါ်မှာဆိုရင် AA က ဗမာ့တပ်မတော်တွေကို မကြောက်ဘူး။ အမြဲတိုက်နေတယ်။ ပြီးရင် မေးစရာမလိုဘဲ တရုတ်နယ်စပ်မှာ ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA ဘယ်သူက ထုတ်ပံ့မှုတွေ ပေးနေလဲဆိုတာ အသိသာကြီးဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့လုံးမှာတောင် တရုတ်ဆိုပြီး ခေါင်းထောင်နေသည့်နိုင်ငံက ရပ်တည် ထုတ်ပံ့ပေးမှတော့ ဗမာ့တပ်မတော်က AA အဖွဲ့ကို အပြီးပျက်တိုက်ဖျက်ဖို့ဆိုတာ ထင်သလောက် မလွယ်ကူလှပါဘူး။ သို့ပေမဲ့ CNF နှင့် India ကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် India က တရုတ်လိုမျိုး CNF အပေါ် ထုတ်ပံ့ ရပ်တည်ပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ထုတ်ပံမှုလုပ်ခဲ့ရင်သော် India ကတော့ သူတို့၏အကျိုးအမြတ်မရှိလျှင် ဘာမှလုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ထုတ်ပံ့ ရပ်တည်ပေးလည်း ဒုတိယကမ္ဘာ့စစ်တုန်းက အမေရိကန် နှင့် ရာရှားတို့၏ နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲကို သူတို့အချင်းချင်းပိုင်နက်မှာ တိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးမပြုဘဲ သူတို့၏ ထုတ်ပံ့မှုဖြင့်ရပ်တည်နေသည့် နိုင်ငံပိုင်နက်တွေမှာ စစ်ပွဲ ဖန်တီးသလိုမျိုး ပေါ်လာပြီး ကျွန်တော်တို့ ချင်းလူမျိုးတွေ သူတို့၏ အုပ်စိုး လွှမ်းမိုးမှုအောက်သို့ ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။
ထို့ကြောင့် အရေးတကြီး သေချာ စဉ်းစားရမယ့်အကြောင်းအရာများထဲမှာမှ မဖြစ်မနေ စဉ်းစားရမည့်အချက်တွေကိုသာ အပေါ်မှာ ဆွေးနွေးသွားတာ ဖြစ်တယ်။ ဒီ အချက်တွေကို သေချာ စဉ်းစားပြီးမှသာ ကျွန်တော်တို့ ဘာကိုပြောဆိုသင့်လဲဆိုတာ ထောက်ပြချင်ယုံမျှဖြင့် ရေးသားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ နိဂုန်းအနေဖြင့် အင်္ဂလိပ် ဆိုရိုးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Look before you leap, think before you speak” “မခုန်ခင်အရင်ကြည့်၊ မပြောခင် အရင်သေချာစဉ်းစား” ဆိုသည့်အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ သေချာစဉ်းစားပြီးမှသာ ပြောဆို လုပ်ဆောင်တာမျိုး ကောင်းပါတယ်။ ထို့သို့မဟုတ်ဘဲ သွေးဆူ ခံပြင်းတဲ့အချိန်တွင် သေချာစဉ်းစားမှုမပြုဘဲ ပြောဆိုရေးသားမှုများကြောင့် လူမျိုးဂုဏ်ကို ထိပါးရုံသာမက အန္တရယ် ဆိုးကျိုးများသည့် တွင်းထဲပို့နိုင်သောကြောင်း သတိပြုရန် တိုက်တွန်းရင်း နိဂုန်းချုပ်ပါသည်။
Editor Note: ဒီအတွေးအမြင်စာသည် The Chinland Post သတင်းကို နေ့စဉ်အားပေးနေသော စာဖတ်ပရိသတ်များ၏ တောင်းဆိုမှုဖြင့် မူရင်း လိုင်း (Laica) ဘာသာကနေ ဗမာလို စီလျှော်အောင် ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်လို့ အကြောင်းအရင်းအဆက်စပ်မရှိဘူးဟု ခံယူပြီး မူးရင်းကို ဖတ်လိုသူများအတွက် ဒီမှ (CLICK HERE)ာ နှိပ်ပြီး ဖတ်နိုင်ပါသည်။
Previous The 7th CNF Party Conference Statement ခငျြးအမြိုးသားတပျဦး၏ သတ်တမအကွိမျ ညီလာခံ ထုတျပွနျကွညောခကျြ
Next သတ္တမကြိမ်မြောက်ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး ပါတီညီလာခံနှင့် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပ